🥇 ▷ Nokia 9 PureView ayaa laga bilaabay Hindiya qiimaha Rs. 49,999 ($ ​​2,188) ✅
Nokia 9 PureView ayaa laga bilaabay Hindiya qiimaha Rs. 49,999 ($ ​​2,188)
Shirkadda Finnishka ah ee HMD Global ayaa goor dhaweyd ku soo bandhigtay suuqyada Hindiya calaamadaha calanka ee Nokia 9 PureView. Maanta, shirkaddu waxay si rasmi ah dalka India ugu shaacisay Nokia 9 PureView.
Taleefannada casriga ah ayaa markii hore lagu dhawaaqay Madasha Wada Tashiga ee loo yaqaan ‘Mobile World Congress 2019’ bishii Febraayo ee sannadkan. Waxa ugu wanaagsan ee taleefannada casriga ahi waa inay la socdaan shan taleefanno kaamirooyin dhabarka taleefanka ah, kaasoo ballaarinaya suurtagalnimada sawir qaadista.
Gudaha Hindiya, Nokia 9 PureView waxaa lagu qiimeeyaa Rs. 49,999, oo qiyaastii $ 2,188 ah oo ku yimaadda hal midab oo keliya – Midnight Blue. Waxay diyaar ku noqon doontaa iibsashada ilaa maanta illaa Flipkart iyo bogga internetka ee Nokia waxaana lagu sii iibin doonaa kanaalada khadka tooska ah laga bilaabo Julaay 17.
Marka la eego qeexitaanka farsamada, taleefanka waxaa lagu qalabeeyay 5.99 inji oo ah OLED oo taageeraya Quad HD + 2880 x 1440 pixels wuxuuna leeyahay isugeyn ah 18: 9, HDR10 iyo bandhig joogto ah.
Shaashadda taleefanka waxaa ilaaliya Gorilla Glass 5. Sidoo kale waa taleefanka gacanta ee ugu horeeya ee Nokia oo leh qalabka sawirka indhaha. Telefoonku wuxuu ku shaqeeyaa Snapdragon 845 SoC, oo lagu daro 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo xusuusta gudaha ah.
Dhabarka dambe ee kiiska waxa lagu qalabeeyay laba toosh LED flash. Nokia 9 PureView waxay leedahay shan kamaradood iyo aaladda ToF (waqtiga duulista). Rakibaadda ‘Penta-lens’ ee taleefanka waxaa ku jira laba 12-megapixel RGB dareemayaal iyo seddex dareemayaal 12-megapixel ah.
Dhammaan shanta Nokia 9 ee dareemayaasha kaameeraha PureView (Faahfaahin) ayaa si isku mid ah u wada shaqeyn kara si ay u qabtaan hal sawir oo leh xalka 50 megapixels ayna awood u leeyihiin isuduwaha sawirka. Iyadoo la adeegsanaayo qalabka loo yaqaan ‘ToF’, Nokia 9 PureView waxay qaadi kartaa khariidad qoto dheer oo ay kujiraan ilaa 1200 lakab oo xog qoto dheer masaafad u jirta ilaa 40 mitir kamarada.
HMD Global waxaay bilaabaysaa labo taleefan oo 5G ah Q3: hal flagship ah oo ay u badan tahay in Nokia 8.1 ku guuleysto Xulashada Tifaftiraha: HMD Global waxay sii deyn doontaa laba teleefoon oo 5G ah rubuc seddexaad: hal flagship iyo u badan tahay inuu ku guuleysto Nokia 8.1
Dhinaca hore waa kamarad 20-megapixel leh f / 1.8 aperture ah oo leh teknoolojiyadda ‘tetracell pixel binning’, oo isku dari kara afar pixels mid ka mid ah sawirrada iftiinka leh ee xaaladaha iftiinka hooseeya. Kaameerada hore ayaa waliba taageerta AI Face Unlock.
Telefonka casriga ahi wuxuu bixiyaa khibradda saafiga ah ee Android ee ugu dambeeyay Android 9 Pie OS. Sida taleefannada kale ee loo yaqaan ‘Android One’, Nokia 9 waxaa lagu socodsiin doonaa barnaamijyada OS muddo labo sano ah iyo boodhadh saddex sano ah.
Waa la xaqiijiyey IP67, taas oo ka dhigaysa mid biyuhu biyuhu ka samaysan yihiin oo aan boodh lahayn. Intaa waxaa u dheer, taleefanka waxaa ku shaqeeya batari 3320 mAh oo leh Quwad Degdeg ah 3.0, wuxuu kaloo taageeraa 10 W wireless ku dallacsiinta.
Falanqeeyayaasha ayaa sheeganaya in HongMeng OS oo ka socota Huawei ay aad ugu dhowdahay inay hanjabaad u noqoto hanashada Android Xiga: Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Huawei’s HongMeng OS ay u badan tahay inuu ku hanjabayo hanashada Android